Mitaintain-dava ny ray aman-dreny: mirongatra indray ny hala-jaza | NewsMada
Mitaintain-dava ny ray aman-dreny: mirongatra indray ny hala-jaza
Par Taratra sur 13/06/2019
Manao ranolava ny filazana zaza very amin’ny peta-drindrina, hatrany amin’ny tambajotran-tserasera any. Ao ireo ankizy miala sakana, te hitsapa karazam-piainana tsy eo anivon’ny ray aman-dreny, ka mitsoaka. Misy koa ireo ray aman-dreny, asa, entin’ny adin-tsaina ka manadino ny zanany, indrindra rehefa miakatra aty an-tanàn-dehibe.
Tsy vitsy koa ny zaza tsy hita popoka tsotra izao. Ny mampalahelo, misy amin’izy ireny ny tazonin’ny mpaka an-keriny sy maty noho ny tsy fahaloavan’ny ray aman-dreny ny vola takin’ireo tsy mataho-tody.
Manoloana ireo tranga rehetra ireo, tsy hay refesina ny fahorian’ny ray aman-dreny. Hita taratra izany amin’ny adihevitra any anaty “facebook” any. Iaraha-mahalala ny fahasarotam-piainana ankehitriny. Ho an’ny ankamaroan’ny tokantrano, samy miasa ny lehilahy sy ny renim-pianakaviana. Noho ireo trangana “zaza very” ireo anefa, tsy misy intsony ny azo itokisana.
Tsy mifidy toerana na fotoana ny fahaverezan-jaza. Indraindray aza, poa toy izay ny tsy fahitana azy ireny. Tsy misy intsony ny fitoniana. Miandrandra ny fitondram-panjakana ny rehetra amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra hampitsaharana izao. Miparitaka any amin’ny tambajotran-tserasera any ny fanentanana “Aoka izay ny hala-jaza”.